Kumele ivuswe kabusha iZululand FM
UBHEKISISA Ngcobo ongasekho, wayengumphathi weZululand FM engasazwakali emoyeni
Fanelesibonge Bengu | June 15, 2021
NGICELA ukuqala ngokudlulisa amazwi enduduzo emndenini kaMuzi Sibiya obengumgcinimafa wesigungu semisakazo yomphakathi, iNational Community Radio Forum (NCRF).
USibiya, obengumnikazi woMgungundlovu FM, kuthiwa ushone ngoLwesine nokusolwa ukuthi uhlaselwe yisifo senhliziyo.
Ukushona kukaSibiya kungikhumbuze uBhekisisa Ngcobo odlule emhlabeni kuqala u-2021 ngenxa yokugula.
UNgcobo ubengumnikazi nomphathi wesiteshi somphakathi esizinze eMelmoth, iZululand FM.
IZululand FM yisiteshi engisazi kahle ngoba ngikhulele oLundi lapho esasizinze khona ngaphambi kokuya eMelmoth. Bengijwayele ukuya khona ohlelweni lukaDJ Priest, siyodlala khona ngoba ngaleso sikhathi nganginguDJ.
Kwakuyinkundla yokuqhakambisa amakhono asoLundi. Kungagcini nje lapho kodwa nokwazi nje ngezindaba zomphakathi esiwakhele, besilalela yona iZululand FM.
Iziteshi zomphakathi zibaluleke lapho-ke uma ziyenza ngendlela into eziyidalelwe ngoba zazisa umphakathi eziwusakazelayo ngezinto ozithinta wona ngqo. Ngike ngizizwe nje ezinye sezizitshela ukuthi zincintisana neziteshi ezisakaza izwe lonke, sezifuna ukukhuluma ngezinto ezingamthinti umuntu oseduze nalapho sisakaza khona.
Kuthe uma iZululand FM isithuthele eMelmoth, yafika yaba wusizo olukhulu emphakathini wakhona nakumasipala obuyisebenzisa ukudlulisa imiyalezo onayo emphakathini.
Ngiphatheke kabi ngidlula ngakhona muva nje, ngithi ngifaka u-97.0 FM, engazi ukuthi yilapho ngithola khona lesi siteshi kodwa ngayizwa ihlohloza.
Ngizwe engathi inkinga ikwilayisensi yayo yokusebenza. Lokhu kufanele ukuba yinto ebuhlungu emphakathini obusakazelwa yiZululand FM. Kungagcini nje lapho, nabasebenzi bayo nabasakazi abasakhula abebethola ithuba lokufunda kabanzi ngomsakazo, bayashayeka.
Ngiyakholwa ukuthi ukuba khona komuntu ofana noMdonso Ngcobo obesebenza khona kulesi siteshi kodwa wagcina esekuKhozi FM, bekubagqugquzela kakhulu ukuthi nabo ngelinye ilanga ithalente labo liyonakwa basebenzele iziteshi ezithathwa njengezinkulu.
Kumele kube khona imizamo yokuthi lesi siteshi singafadalali ngokuhamba kukaNgcobo. UMdonso ngenhlanhla ubengahlukani nomfowabo. Ngiyakholwa ukuthi kukhona amfundise khona ngokuphathwa kwesiteshi, ngakho kuzomele azame ukusivusa ungapheli umlando waso nowomfowabo. Ngenhlanhla bakhona nabangani bakaNgcobo njengoSandile Ngema ophethe iMbokodo FM noLucky Dlamini weVibe FM abangamsiza.
NakuMgungundlovu FM, nginethemba lokuthi ngeke kube khona ukuphazamiseka ngenxa yokuhamba kukaSibiya.
Imisakazo yomphakathi ineqhaza elikhulu elidlalayo emiphakathini ngakho kumele ingashabalali.
Ungangibhalela [email protected], kwiTwitter @fanelebengu noma kwiFacebook Fanelesibonge Bengu